Spiraea Berezolistnaya: nkọwa, ọdịda na-emeghe ala na-elekọta, foto - Mkpụrụ ubi - 2019
Spiraea Berezolistnaya: atụmatụ nke ịkụ
Akara birch-leaved bụ osisi ornamental nke ga-ada ọbụna novice gardeners: ya niile mara mma, ọ bụ unpretentious, anabata oyi na okpomọkụ nke ọma.
Ka anyi leba anya n'uzo ndi ozo n'onu ohia na-achikota na ilekọta ya.
Ngwa na nhazi ime obodo
Nkọwa na njirimara
Spiraea birch bu shrub nke ndi Pink. N'ihe ruru n'ogo 60 cm n'ogologo. Umu a natara aha ya n'ihi oval green leaf with small veins from below.
Ị ma? N'ime ndị mmadụ, a na - akpọkarị spirae "willow". Nke a bụ ihe mehiere: ala ahịhịa juru bụ osisi ahịhịa, ahihia bụ ohia.
Nke a omenala ji spherical ok okpueze na ribbed zigzag curved Ome. Akwụkwọ na-egosi na njedebe nke April, na ọdịda - na October. Ogologo ha bụ 0,5 cm, ọdịdị ahụ bụ elliptical.
Osisi na-eto eto site na June ruo July kwa afọ, malite site na afọ 3-4. Inflorescences bụ nnukwu tangle-panicles si dịgasị iche iche obere okooko osisi nke na-acha ọcha ma ọ bụ ìhè pink agba.
Mụta ihe banyere ịkụ mkpụrụ osisi Japanese, "Bumalda", "Vangutta", "Grefsheym", na-acha ọcha.
Spiraea berezolistnaya na-ezo aka hardy osisi: ọ dịghị achọ pụrụ iche oyi ndo, ejikarị anabata akọrọ ihu igwe. A na-ewere ihe kachasị mma maka ibu ọhịa ka ọ bụrụ ebe a na-emeghe na ájá ájá.
Ịgha mkpụrụ spiraa birch malitere site na nhọrọ nke ebe. Osisi okooko osisi kwesịrị ịgba ọkụ, ọ bụrụgodị na saịtị ahụ dị na mpaghara ọkụ. N'elu ndò ma ọ bụ ndò nke ndò ka ohia ga-epulite, ma okooko agaghị aba ụba.
A na-ewere oge kachasị mma maka akuku dị ka mmiri na-asọ oyi ma ọ bụ na-ezo ezo n'ụbọchị September: ala kwesịrị ịbụ mmiri. Ghaa oke ohia a na ala di ala nke bara uru na humus. Ala mmiri na-enwe mmetụta bara uru na agba nke epupụta.
Ọdịda na-amalite site na-egwu olulu maka ohia ọ bụla. Ya n'obosara kwesịrị gafere karịa nke mgbọrọgwụ usoro site 25-30%, na ịdị omimi kwesịrị 40-50 cm.
A ghaghị ekpuchi ala ala olulu. Iji mee nke a, ịnwere ike iji:
sod ma ọ bụ ahịhịa ụwa.
Ogologo kachasị dị n'etiti olulu dị 30 cm. Na-adabere na nsonaazụ chọrọ, a na-akụ spireas n'ebe dị anya site na mita 1.5.
Tupu ịgha mkpụrụ, a ghaghị iji nlezianya nyochaa mgbọrọgwụ nke nwa osisi shrub, belata alaka osisi na okpukpu. Mgbe ị wụnye mkpụrụ osisi n'ala, a na-agbanwe usoro mgbọrọgwụ wee kpuchie ụwa.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ala maka akuku nwere ụrọ buru ibu, mgbe ahụ, a ghaghị ime olulu ahụ ọtụtụ ugboro karịa mgbọrọgwụ, a ga-ejikwa gravel mee ihe dị ka mmiri mmiri.
Nlekọta Spiraea dị nnọọ mfe. Ala na-eto eto na-eto eto aghaghị ịtọhapụ ya mgbe ụfọdụ, na-ezere compaction. Na-emekarị nke a ga-eme mgbe atọ na mbibi ata.
Ya mere na ụwa anaghị agwụ agwụ, ọ na-agba. Iji mee nke a, mgbe akuku osisi n'elu wụsara a oyi akwa nke peat. Ọdịbendị a na-anabata kwachaa ma nata ngwa ngwa. A na-atụ aro ụdị osisi birch ka a gbutuo ha kwa afọ mgbe osisi ahụ si na oyi bilie. A na-ewepu mkpụmkpụ osisi dị iche iche, ma ndị ọzọ na-ebipụ ya na nnukwu buds.
Usoro dị otú ahụ na-enye ohere ọ bụghị nanị ime ka mma nke ohia ahụ dị elu, kamakwa iji mee ka ndụ ya dịkwuo ogologo.
Mgbe ohia dị afọ 4, ị nwere ike igbutu akụkụ nke elu karịa 30 cm si n'ala. Ma ọ bụghị ya, oge ịgba oge ochie ahụ ga-agbada ma daa mbà. A na-agbanwe nke ohia nke birch nke birch kpamkpam kwa afọ 15-20.
Ịme ntụrụndụ bụ akụkụ bụ isi nke ilekọta ya. Osisi dị ike ma nwee ike ịnagide ụkọ mmiri ruo oge ụfọdụ, ma ogologo oge nke ịgbara mmiri mmiri nwere ike ime ka ọ nwụọ. Na oge na-ekpo ọkụ n'oge na-ekpo ọkụ n'oge akuku, a na-eme ihe ọṅụṅụ na etiti oge nke ụbọchị 14. Olu mmiri kwa ohia dị ihe dị ka lita 15.
N'oge mgbụsị akwụkwọ, a ghaghị ịhazi mmiri na-adabere na ihu igwe.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-eguzobe okpomọkụ kwa ụbọchị n'okpuru + 10 Celsius, a kwụsịrị ịgbara mmiri ruo mgbe mmiri ahụ na-eteta.
Maka lush okooko osisi ifatilaiza. A na-atụ aro na a na-atụgharị birch sprayer ugboro abụọ n'afọ: na mmalite oge opupu ihe ubi mgbe ọ bụla kwachaa na mmalite June tupu okooko.
N'ihi na akwa eji eji eji slurry, na-atụgharị ya na mmiri 1: 6. Iji mee ka mmetụta ahụ pụta, a na-agbakwunye 10 g nke superphosphate na ngwakọta.
Tụkwasị na nke a, a pụrụ iji nri pụrụ iche na-emepụta osisi ahụ na nitrogen, potassium, phosphorus na ndị ọzọ macronutrients.
Spiraea berezolistnaya adịghị enwekarị ọrịa, mana ọ na-eme na ọ na-emetụta ndị ọrịa fungal: ntụ na ntụ ntụ ntụ. Maka ngosipụta ọ bụla nke ero, a na-atụ aro ka ị jiri mgbatị na-atụ egwu ("Fundazol", "Fitosporin-M", "Ditan M-45", Bordeaux mixture, colloidal sulfur).
A na-akpọkwa Alto Super, Kuproksat, Allett, Bravo, Shavit, Kumulus, Merpan, Teldor, Folikur dịka ọgwụ ọjọọ.
Ma pests spirea dị ka. N'oge okpomọkụ, osisi nwere ike ịwakpo:
onye ọrụ nchịkwa;
Ọ dị mkpa! Ilekọta osisi ahụ n'oge na-adịghị anya bụ igbochi kachasị mma iji gbochie pests.
Ihe ịrịba ama ndị doro anya nke ọnụnọ nke pests na ihe ọkụkụ nwere ike ịbụ osisi na-agbagwo agbagọ ma mebie emebi, cobwebs, ịka nká na akwukwo ọdịda. Na ire ere, e nwere ọtụtụ ihe pụrụ iche na-akwado pests. A na-eji Malophos, Metaphos ma ọ bụ Phosphamide megide akọrọ. Ngwurugwu dị irè megide aphids, leafworms na miner. A na-enye mmetụta kachasị mma site na ebe ngwaahịa na-agbanwe agbanwe na kemịkal na-egbu egbu.
Ndị na-emepụta ihe na-eji ojiji birch spiraea eme ihe dị iche iche:
Ihe uru nke birch spiraea bụ na ọ nwere ike ịrụ ọrụ ọhụụ ọ bụghị naanị n'oge okpomọkụ n'oge oge okooko. Ọ dịghị obere akwụkwọ, ọ na-ele anya ọdịda, mgbe epupụta na-acha uhie uhie. A pụrụ inweta mmetụta pụrụ iche site na ịmepụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ shrub na mgbanaka ọkụ.
Ị ma? Dị ka akwụkwọ ọkọwa okwu V.I. Dahl si kwuo, na n'oge gara aga, a dịghị etinyere spirayus maka ịchọ mma: a na-eji ụtarị mee alaka ya.
N'ihi oke elu nke ụdị osisi a, enwere ike iji ya ọ bụghị nanị maka hedges, kamakwa maka oke ugwu. Ube birch na-adabara nke ọma na spireas nile, yana nke Roses, peonies, asters, viburnum, lilac na ọtụtụ osisi coniferous.
Ọ dịghị mkpa ma ị bụ onye na-elekọta ubi ma ọ bụ na-amalite ịmalite ụzọ mbụ na azụmahịa a, na-eto eto gị birch spiraea maka onye ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị maara nuances nke ilekọta ya.
Echefula banyere nri nri nke oge a, jikọta okooko ya na agba ndị ọzọ nke flowerbeds, osisi ahụ ga-akwụghachi onye nwe ya mma ya na ísì ụtọ.
Uru na nsogbu nke mmiri mmiri maka ndị nọọsụ. Kedu etu mgbe m ga-ewere ngwaahịa ahụ?
Redcurrant "Vixne": àgwà, cultivation agrotechnology
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Spiraea Berezolistnaya: atụmatụ nke ịkụ